बचत खाताको ब्याज २% घट्यो, मुद्दतीको व्यक्तिगतमा ९ र संस्थागतमा १०% कायम | गृहपृष्ठ
Home समाचार बचत खाताको ब्याज २% घट्यो, मुद्दतीको व्यक्तिगतमा ९ र संस्थागतमा १०% कायम
on: २५ आश्विन २०७५, बिहीबार १८:५३ समाचार
बचत खाताको ब्याज २% घट्यो, मुद्दतीको व्यक्तिगतमा ९ र संस्थागतमा १०% कायम
असोज २५, काठमाडौं । वाणिज्य बैङ्कहरुले एकआपसमा मिलेमतो गरी नयाँ ब्याजदर कायम गर्ने समझदारी गरेका छन् । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको बिहीवारको बैठकले व्यक्तिगत बचत खातामा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दिने समझदारी गरेका हुन् । बैठकमा २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता थियो ।
यस्तै व्यक्तिगत मुद्दती खातामा नौ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती खातामा भने १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएका हुन् । केही बैङ्कले निक्षेप तान्न भन्दै बचत खाता र मुद्दती खातामा बढी ब्याज दिन थालेका थिए । त्यसबाट बचतकर्तालाई भने फाइदा भएको थियो ।
नवील बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ब्याजदरमा केही सामान्य समझदारी भएको जानकारी दिए । उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बद्ध बैङ्कका सरोकारवालाबीच भइरहेको छलफलको निरन्तरताका क्रममा बिहीवार सङ्घको बैठक बसेको बताए ।
यसअघि साधारण बचतमा सात प्रतिशतसम्म र मुद्दतीमा १० दशमलव ५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने समझदारी बैङ्कहरुले गरेका थिए । तर केही बैङ्कले भने संस्थागत बचतकर्तालाई तोकिएभन्दा बढी ब्याजदर दिएको भन्दै बैकर्स सङ्घमा उजुरी गरेका थिए ।
गत साउनदेखि हालसम्म बैङ्कहरुले रू. ३९ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् । तर सोही अवधिमा रू. ९२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन नभएपछि बजारमा फेरि लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारमा करीब रू. ३५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै तरलता रहेको छ । रासस
२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०५:०१